कसरी गर्ने स्नेक प्लान्टको स्याहार? | आफ्नैबारी
Published on : September 16, 2019 September 16, 2019 by आफ्नैबारी
स्नेक प्लान्टले रातको बेला पनि अक्सिजन प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसैले यसलाई बेडरुममा राख्नका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। बेडरुम प्लान्टका नामले पनि चर्चित स्नेक प्लान्टले हावा शुध्द गर्ने काम अरु कैयन ईन्डोर बिरुवा भन्दा प्रभावकारी रुपमा गर्दछ। यसलाई स्याहार र रेखदेख गर्न पनि सजिलो हुने हुदाँ यो सुन्दर बिरुवा धेरैको रोजाईमा पर्न थालेको छ।
स्नेक प्लान्टले प्रशस्त कार्बन मोनोअक्साईड लिएर अक्सिजन सप्लाई गर्दछ। यसका साथै, यसले हावामा रहेका benzene, xylene, trichloroethylene and formaldehyde जस्ता टक्सिनलाई फिल्टर गर्दछ। घर, अफिस तथा बेडरुममा यो बिरुवा सजाउदा सकारात्मक र स्वस्थ वातावरण प्राप्त हुन्छ। अमेरीकन संस्था नासाले अध्ययन गरेर तयार पारेको हावा सफा गर्ने ईनडोर विरुवाहरुको लिस्टमा स्नेक प्लान्ट पनि छ। नासाको अध्ययनमा ५ मा ४ हानिकरक टक्सिन सफा गर्ने बिरुवा भनेर ब्याख्या भएको छ। रातको बेला सकृय समेत हुने हुदा स्नेक प्लानट अरु भन्दा फरक बनेको छ।
स्नेक प्लान्ट बिभिन्न रंग र आकारमा पाईन्छन। फिका हरियो पातमा गाढा हरियो धर्साहरुले स्नेक प्लान्ट सुन्दर बनाएको हुन्छ। दुबै तिर धार र चुच्चो परेको स्नेक प्लान्टका पातहरुले यसलाई सुन्दर बनाउछ। कुनै प्रजातिका स्नेक प्लान्टका एक मिटर सम्म लामो पात हुन्छ। कुनै प्राजाति चाहि होचो प्राकारका पनि हुन्छन। होचो र गुचुमुच्च परेका पात भएका प्रजातिलाई ट्यूईस्टेस सिस्टर पनि भनिन्छ।
पहेंलो र हरियो रंगको स्नेक प्लान्टका बिरुवा पनि पाईन्छन्।
स्नेक प्लान्टको स्याहार | घाम पानी र मल
स्नेक प्लान्टलाई हुर्काउन अरु बिरुवालाई झैं एकदम स्याहार चाहिदैन। घाम नलाग्ने तर उज्यालो घरको कुनामा पनि यो रमाउछ। हल्का सुख्खा माटोमा पनि हुर्कने हुदा यसलाई छिटो छिटो सिँचाई पनि गरिरहनु पर्दैन। यसलाई १० दिनमा एक पटक राम्रोसंग पानी सिँचाई गर्दा राम्रो हुन्छ। गमलाको माटोमा २ ईन्च जति औला गाडेर चेक गर्दा माटोमा चिसो पना छैन भने यसमा पानी सिँचाई गर्न सकिन्छ। गमलाको सबै माटोलाई चिसो बनाउने गरी पानी सिँचाई गर्नु पर्छ। सके सम्म पानी धेरै भएर ओभर फ्लो नहोस भनेर सचेत हुनु पर्छ। ओभर फ्लो हुदा बिरुवा राखेको टेवल फोहोर हुने मात्र हैन माटोमा रहेको पौष्टिक चिजहरु पनि बग्ने हुँदा बिरुवालाई फाईदा हुदैन।
स्नेक प्लान्टलाई ३ महिनामा एक पटक राम्रो गुणस्तरको कम्पोष्टमलले टप ड्रेसिङ गर्नु राम्रो हुन्छ। बेला बेलामा एनपीके स्प्रे गर्दा पनि राम्रो हुन्छ।
स्नेक प्लान्टका लागि गमला
त्यसो त फूल वा बिरुवाको लागि कस्तो गमला प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा तपाईको ईच्छा र डिजाईनमा भर पर्छ। स्नेक प्लान्ट पनि माटो, प्लास्टिक र सेरामिक सबै खाले गमलामा हुर्काउन सकिन्छ।
काठमान्डौमा स्नेक प्लान्ट चाहिए ९८४०४८१७६१ मा फोन गर्नुहोला ।
बिरुवा पहेंला भए? पानी कति दिने याद गर्नुहोस।
Previous Previous post: कौसीखेतीको माटो खुकुलो बनाउने यसरी…..